Umbulali wokhula esidlweni sasekuseni - i-US Right to Know
Umbulali wokhula ekuseni
UCarey Gillam, Izindaba Zempilo Yezemvelo, Okthoba 11, 2017
Inothi lomhleli: Ucezu olungezansi lucashunwe encwadini entsha kaCarey Gillam I-Whitewash: Indaba Yombulali Wokhula, Umdlavuza, Nenkohlakalo Yesayensi, enyatheliswa yi-Island Press.
Kubantu abaningi, i-bagel ethosiwe efakwe uju ingazwakala njengokukhetha kwasekuseni okunempilo. Abanye bangakhetha isitsha se-oatmeal noma ama-cornflakes noma ipuleti elishisayo lamaqanda agayiwe. Bambalwa abangahle bamukele umthamo wombulali wokhula ohlotshaniswa nomdlavuza esidlweni sabo sasekuseni.
Kodwa-ke yilokho kanye ukuhlolwa kwe-laboratory yangasese e-United States okuqale ukukhombisa ngokuvama okwethusayo ngo-2014: izinsalela zemithi yokubulala ukhula esetshenziswa kakhulu emhlabeni bezingena ekudleni kwaseMelika.
Ukuhlolwa kusukela lapho, ngabacwaningi abazimele nabomphakathi, kukhombisile izinsalela ze-glyphosate hhayi kuma-bagels, uju, ne-oatmeal kuphela kepha futhi kunqwaba yemikhiqizo evamise ukugcwala amashalofu ezitolo, kufaka phakathi ufulawa, amaqanda, amakhukhi, okusanhlamvu namabha okusanhlamvu , isosi yesoya, ubhiya nefomula yezinsana.
Ngempela, izinsalela ze-glyphosate zisabalele kangangokuba zitholakale emchameni womuntu. Imfuyo nayo idla lezi zinsalela ezinhlamvini ezisetshenziselwa ukwenza ukudla kwazo, kufaka phakathi ummbila, isoya, i-alfalfa nokolweni.
I-United States ivumela phakathi kwamazinga aphakeme kakhulu ezinsalela ze-glyphosate, abagxeki abathi kugcizelela izinga lethonya iMonsanto elinalo kubalawuli.
Izinsalela zeGlyphosate zitholakale kumasampula esinkwa e-United Kingdom iminyaka, kanye nasekuthunyelweni kukakolweni oshiya i-United States izimakethe zaphesheya kwezilwandle. "AbaseMelika badla i-glyphosate ekudleni okuvamile nsuku zonke," kusho i-Alliance for Natural Health embikweni wayo wango-Ephreli 2016, oveze izinsalela ze-glyphosate ezitholwe emaqandeni nakukhilimu wekhofi, ama-bagel kanye ne-oatmeal.
ENorth Dakota, isazi sezolimo nesivuno esikhungweni semfundo ephakeme, uJoel Ransom, waba nelukuluku lokwazi izinsalela ze-glyphosate kangangokuthi ngo-2014 wenza izivivinyo zakhe kumasampula kafulawa avela esifundeni. INorth Dakota ikhula kakhulu ukolweni wasentwasahlobo obomvu obunzima, uhlobo oluthathwa njengesicukuthwane sikakolweni futhi oluphethe amaprotheni aphakeme kakhulu kuwo wonke amakilasi kakolweni waseMelika.
Isetshenziselwa ukwenza ezinye zezinkwa zemvubelo ezinhle kakhulu emhlabeni, ama-hard roll nama-bagels. Kepha ukutshala ukolweni nokuletha isivuno esinempilo akuvunwa akulula ngaso sonke isikhathi endaweni eyaziwa ngezimo ezibandayo nezimanzi. Ukwenza ukuvuna isivuno kube lula, abalimi abaningi baseNyakatho Dakota bafafaza izitshalo zabo zikakolweni ngqo nge-glyphosate ukusiza ukomisa izitshalo ngesonto noma ngaphezulu ngaphambi kokuthi bakhiphe inhlanganisela yabo. Lo mkhuba uvamile naseSaskatchewan, ngaphesheya komngcele waseCanada. Ngakho-ke lapho uRhleng enza izivivinyo zakhe kumasampula kafulawa asendaweni, kufaka phakathi ufulawa waseCanada, wayelindele ukuthola amasampula athile ane-glyphosate. Ngokuqinisekile wayengalindelanga ukuthi bonke babe nezinsalela ze-glyphosate. Kodwa benzile.
Kusukela okungenani ngawo-1960, ochwepheshe bezokudla nezempilo emhlabeni wonke baye bafuna ukulinganisa ukuthi ungakanani umuthi wokubulala izinambuzane ongangena kuwo nsuku zonke— “ukudla okwamukelekayo nsuku zonke” (i-ADI) —konke isikhathi sokuphila ngaphandle kwengozi yezempilo ephawulekayo.
I-United States ivumela phakathi kwamazinga aphakeme kakhulu ezinsalela ze-glyphosate, abagxeki abathi kugcizelela izinga lethonya iMonsanto elinalo kubalawuli. I-EPA ize yafika ngisho nokusho ukuthi imingcele yezokuphepha edinga umthetho ukuvikela izingane ekuvezweni kwezibulala-zinambuzane ingancishiswa uma kukhulunywa nge-glyphosate.